ဘာဘေးဒိုးစကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အခွန် & သီးသန့်လုံခြုံရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
A ဘာဘေးဒိုးစကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး အဆိုပါဘဏ္ဍာရေးဆွဲဆောင်အားပေးမှုများအက်ဥပဒေအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ အဆိုပါဥပဒေများကိုမူလက 1974 အတွက်မွေးစားအဓိကတည်းဖြတ်မူနှင့်အတူ 2007 အတွက်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။
ဘာဘေးဒိုးစ Corporation : အပါအဝင်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုလက်ခံရရှိ
အနိမ့်အခွန်: 2.5% မှာအခြားအတရားစီရင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဘာဘေးဒိုးစရှိအကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုအလွန်နိမ့်သည်။ ဘာဘေးဒိုးစလည်းမြို့တော်အကျိုးအမြတ်နှင့် withholding မှအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကမ်းလှမ်း အခွန်.
10 တစ်နှစ်တာအခွန်အားလပ်ရက်: တစ်ဦးကအယူအဆမှာ "ဆယ်တစ်နှစ်အခွန်အားလပ်ရက်" ဆယ်နှစ်ဘာဘေးဒိုးစအခွန်အခများထံမှကော်ပိုရေးရှင်းကင်းလွတ်ခွင့်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကြောင်းဆယ်စုနှစ်ဖြတ်သန်းပြီးနောက်ကော်ပိုရေးရှင်းတစ် 2.5% အခွန်နှုန်းကိုဆပ်ဖို့မျှော်လင့်ရသည်။ အခွန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေဟာသူတို့ရဲ့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေကြေညာပေးရမည်သောအခြားနိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူများနှင့်အတူသို့သော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ။
သွင်းကုန် Duty လွတ်ကင်းစေခြင်း: ကုန်စည်နှင့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် processing ဘာဘေးဒိုးစကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ်တင်သွင်းတာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရတာကိုနှစ်သက်ကြတယ်။
ဝေမျှမယ် Capital ကို Authorized အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံး: ဘာဘေးဒိုးစအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်လိုအပ်ချက် BBD0ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်: ဗြိတိသျှဓနသဟာယဟောင်းကိုလိုနီအဖြစ်, အင်္ဂလိပ်ဘာဘေးဒိုးစအတွက်တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရကူညီစောင့်ရှောက်ရေး: ဘာဘေးဒိုးစလည်းအစိုးရအေဂျင်စီဘဏ္ဍာရေးအကူအညီနှင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏အမြန်ဆန်ထိရောက်မှုရှိသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်၎င်း၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းသူတွေကိုကူညီပေးဖို့ Invest ဘာဘေးဒိုးစ (ခလရ) လို့ခေါ်တဲ့သိရသည်။ ထို့အပြင်မရှိကုန်ကျစရိတ်မှာကော်ပိုရေးရှင်းမှအပြည့်အဝအကူအညီဘာဘေးဒိုးစရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်း (BIDC) ကထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။
တစ်ဦးကဘာဘေးဒိုးစကော်ပိုရေးရှင်းပြီးသားကော်ပိုရေးရှင်းအမည်များကိုရှိရင်းစွဲဆင်တူမဟုတ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့အမည်အားရွေးချယ်ရမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုကော်ပိုရိတ်နာမသုံးဗားရှင်းသူတို့ထဲကတဦးတည်းအတည်ပြုလိမ့်မည်ဟုမြော်လင့်နှင့်အတူတင်သွင်းနေကြသည်။ မရွေးပြီးတာနဲ့နာမည်တွေသုံးလအဘို့သိုထားနိုင်ပါတယ်။ $ 150 မှ $ 200 အမေရိကန်ဒေါ်လာအကြားဤကြိုတင်မှာယူမှုကုန်ကျစရိတ်။ တင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြီးနောက်, အဆိုပြုထားသောအမည်များကို၎င်းတို့၏အဆင့်အတန်းကိုစစျဆေးဖို့ scan ဖတ်နေကြသည်။ သုံးရက်အတွင်း, တဦးတည်းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
ဘာဘေးဒိုးစအတွက်ထည့်သွင်းရန်အနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာမြို့တော်လိုအပ်ချက် BBD0ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဘေးဒိုးစကော်ပိုရေးရှင်း 2.5% ၏အနိမ့်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏နေ့စွဲကနေဒီအခွန်ကနေ 10 နှစ်အားလပ်ရက်လည်းမရှိ။
ဘာဘေးဒိုးစကော်ပိုရေးရှင်း BBD 750 ၏နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေးပေးဆောင်ဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ကြေးရှိရလိမ့်မည်။
ဘာဘေးဒိုးစကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုသေချာ။ ကော်ပိုရိတ် stockholders နှင့်ဒါရိုက်တာများများ၏အမည်များပုဂ္ဂလိကရှိနေဆဲနှင့်ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များတိုးမြှင့်လျှို့ဝှက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာမိနစ်နှင့်အစည်းအဝေးများတွေ့ဆုံတဲ့စံချိန်ကိုစောင့်ရှောက်ရကြမည်။ သို့သော်ကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာများ file မှမလိုအပ်ပါ။
ဘာဘေးဒိုးစကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်.5ရက်ပေါင်းယူမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ပြီးစီးအချိန်လျှောက်ထားသူသည်၎င်း၏မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများပြီးဆုံးဘယ်လိုတိကျစွာ, အကော်ပိုရိတ်နာမတျော၏ခွင့်ပြုချက်အပေါ်မူတည်အဖြစ်။
ဘာဘေးဒိုးစကာရစ်ဘီယံပင်လယ်အနီးရှိမြောက်အတ္တလန္တိတ်ရဲ့ငယျဆုံးသောအန်တီတည်ရှိသောကျွန်းတစ်ကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အနီးဆုံးကျွန်းများကွာ (104 ကီလိုမီတာ) 168 မိုင်အကြောင်းကိုထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို 250 မိုင် (400 ကီလိုမီတာ) နှင့်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကျွန်း 21 မိုင် (34 ကီလိုမီတာ) ရှည်လျား 14 မိုင်အားဖြင့် (23 ကီလိုမီတာ) ကျယ်ပြန့်သည်နှင့် 167 စတုရန်းမိုင် (432 ကီလိုမီတာ) ၏ဧရိယာကိုဖုံးလွှမ်း။ ၎င်း၏ခန့်မှန်းလူဦးရေ 290,000 လူတွေဖြစ်ပါတယ်။
1627 မှာကျွန်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာအားဖြင့်အခြေချခြင်းနှင့်ဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘာဘေးဒိုးစ 1966 အတွက်၎င်း၏လွတ်လပ်ရေးရရှိသောနှင့်ဗြိတိသျှဓနသဟာယ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဘာဘေးဒိုးစကော်ပိုရေးရှင်းအပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစား: တစ်ဦးက 10 နှစ်အခွန်အားလပ်ရက်ပြီးတော့တစ်ခုသာ 2.5% အခွန်နှုန်းတင်သွင်းတာဝန်ကင်းလွတ်ခွင့်, ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်, အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်နှင့်အတူအစိုးရအကူအညီကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတိုင်းပြည်ပေးဆောင် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ။